A ga-enwerịrị 'ikike ịnwụ na COVID-19'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » A ga-emerịrị 'ikike ịnwụ na COVID-19'
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
A ga-emerịrị 'ikike ịnwụ na COVID-19'
Onye omebe iwu Australia Pauline Hanson
Enweghị ọgwụ mgbochi ọ bụla dị mkpa!
Onye omebe iwu Ọstrelia Hanson na -ekwusi ike na ọ bụ eziokwu ọbụlagodi mgbe a gwara ya na ọgwụ mgbochi ndị dị ugbu a agabigala nnwale ndị dị mkpa ma bute nnukwu ihe egwu na ahụike ma e jiri ya tụnyere ibute nje ahụ.
Ara mgbochi mgbochi ọgwụ mgbochi nke Senator Pauline Hanson kwughachiri
Senator Pauline Hanson na-ekwu na anwalebeghị ọgwụ mgbochi COVID-19 nke ọma.
A maara HE Pauline Hanson maka okwu arụmụka gbasara mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ọ bụ onye na -akwado mgbochi vax.
Ndị ọkachamara ahụike kwuru okwu Hanson wee kwaa ya emo na ntanetị.
Onye ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị Australia nke One Nation, Senator Pauline Hanson, kwupụtara na azụmahịa na gọọmentị ekwesịghị 'ịmanye ma ọ bụ ịmaja' ndị mmadụ ka ha nweta ọgwụ mgbochi yana na ndị mmadụ ga-enwerịrị nhọrọ ịjụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19, ọbụlagodi na ha na -anwụ site na nje.
Ọ ana -egosi mmegharị dị otú ahụs na -aga n'ihu na UK na obodo ndị ọzọ.
Hanson kwuru, sị: “Nye ndị mmadụ ohere, nweta ọgwụ mgbochi…
N'ịzọrọ na anwaleghị ọgwụ mgbochi COVID-19 nke ọma, onye omebe iwu ahụ kwuru na '' a gaghị emegbu ya '' ma ọ bụ yie ya egwu ịnwe ọgwụ mgbochi.
Hanson na -ekwusi ike na ọ bụ eziokwu ọbụlagodi mgbe a gwara ya na ọgwụ mgbochi ndị dị ugbu a agabigala nnwale ndị dị mkpa ma bute nnukwu ihe egwu na ahụike ma e jiri ya tụnyere ibute nje ahụ.
A maara Hanson maka ikwu okwu na -ese okwu gbasara mmemme ịgba ọgwụ mgbochi na -aga n'ihu. N’ọnwa gara aga, ndị na-emepụta ihe ngosi redio a ma ama na Sydney họọrọ ‘ịchapu’ ụfọdụ okwu mgbochi mgbochi ya n’oge a na-agba ajụjụ ọnụ nke nwere igbu oge nke 30.
Ndị ọkachamara ahụike katọrọ ihe Hanson kwuru ma jiri ya mee ihe ọchị na ịntanetị na-ekwu na site na ịgbasa ozi mgbochi ịgba ọgwụ mgbochi Hanson na-etinye ndụ ndị ọzọ n'ihe egwu. “Onye nzuzu dị ize ndụ,” ka otu onye dere n'Ịntanet.
Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga-abụrịrị iwu maka ndị ọrụ nlekọta ahụike agadi bi na Australia site na Septemba 17. Agbanyeghị, Prime Minista Scott Morrison kwuputara taa na gọọmentị obodo enweghị atụmatụ maka iwu ịgba ọgwụ mgbochi sara mbara.
PM kwuru, "Anyị maara na enwere mkpali n'ime ọgwụ mgbochi." "O yikarịrị ka ị ga -enweta [nje ahụ], ọ ga -esiri gị ike ịrịa ọrịa nke ukwuu na ị gaghị enye enyi gị."
Ka ọ dị ugbu a, 22.5% nke ndị Australia gbara afọ 16 agbaala ọgwụ mgbochi nke ọma yana 44.2% anatala opekata mpe otu ọgwụ mgbochi, dịka gọọmentị siri kwuo.
William R MacPheat ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 10, 2021 na 18:49
Enyochabeghị ọgwụ mgbochi ahụ nke ọma! Ha bụ nnwale, naanị ihe mberede. Enwetaghị nlebara anya maka usoro mgbochi ndị ọzọ na -enwe obere ma ọ bụ enweghị mmetụta ọ bụla, ọkachasị vitamin D3. Ọ nweghị onye nwere ike ikwu n'ụzọ ziri ezi na mmetụta nke ọgwụ mgbochi adịghị njọ dịka nsonaazụ nje. N'ezie enwere ndị dọkịta na -ekwu na ha kwenyere na ọgwụ mgbochi ahụ ga -emecha gbuo mmadụ karịa nje ahụ. Anyị enweghị ozi ogologo oge na ọgwụ mgbochi. Ị na -eduhie ndị mmadụ n'akụkọ a.